ဖေ့စ်ဘွတ်ကို စွန့်ခွာသွားတဲ့ အနုပညာရှင်တော်တော်များများရဲ့ အချစ်တော် Cele Cele Small - Myanmarload
ဖေ့စ်ဘွတ်ကို စွန့်ခွာသွားတဲ့ အနုပညာရှင်တော်တော်များများရဲ့ အချစ်တော် Cele Cele Small
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 19:46 December 07, 2016
ဆယ့် Page ကိုစကတည်းကအားပေးခဲ့တဲ့ Fan တွေကို ဆယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်....ဆယ် ဒီ Page ကိုဒီမှာရပ်နား လက်ပါပြီ.... ခုလိုနားတာ ဘယ်သူ့ပယောဂမှပါလို့ု့မဟုတ် ပါဘူး....ဆယ် ဒီ Page အပေါ်အချိန်ပေးခဲ့လို့. ဆယ့်အပြင် လက်တွေ့ဘဝကမိသားစု သူငယ်ချင်း ပြီးတော့ ဆယ့်ရဲ့လူငယ် ဘဝ အားလုံးဆုံးရှုံးရလို့ပါ....
ပြီးတော့ ဆယ် ဟန်လေး ကိုယ်ဝန်ကိစ္စတင်ပြီးတဲ့အချိန်ဆယ်နောင်တရမိတယ်.....သူ့အတိတ်မှာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ သူကအခုအချိန်မှာမိဘလုပ်ကျွေးနေတဲ့သူတဲ့ ဆယ်ဒီသတင်းကိုခုနကမှသိတော့မျက်ရည်ကျမိပါတယ်.....
ဆယ်ရဲ့အခု Page ကအကုသိုလ် Page ဆိုတာ ဆယ်သိပါတယ် အာ့အတွက်ငရဲခံရမယ်ဆိုလဲဆယ်မကြောက်ပါဘူး....ဆယ် ပျော်ပါတယ်.... ဒီ Page ကြောင့် ဆယ်အရင်ကအရမ်းခင်ချင် လို့ သာမာန်ဘဝတုန်းက Add Me Add Me လို့လို်ရေးခဲ့ပြီး သူက လာ Add ပေးလို့အရမ်းပျော်ရတဲ့ မယ်မယ် ဖြူစင်အေးခိုင် နက်လဲခင်ခွင့်ရင်းနှီးခွင့်ကိုဒီ Page ကြောင့်ရခဲ့လို့ပါ...ဆယ့် ဒီ Page လေးတည်တံ့ဖို့ ဘေလ်တွေအကုန်ခံ စေတနာထားပြီး
စောင့်ရှောက်လဲပေးခဲ့ပါတယ်... အာ့ဒီ့အတွက် မယ်မယ်ကို ကျိုင်းဇူးပါနော်.... ဒါပေမယ့် ဒီညမှာပဲဆယ်ဆုံးဖြတ်လက်တာ တော့ဆယ့်ရဲ့. Page ကိုဆယ်ခုကစပြီးစွန့်လွှတ်လက်ပါပြီ အနုပညာလောကသားတွေလဲပျော်ပါစေတော့.... ဆယ်သူတို့ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါရစေ.... ဆယ်အခုကစပြီး သာမာန်လူဘဝနက်
နေပြီး သာမာန် Real Acc နက်ပဲ Facebook သုံးပါတော့မယ်.. ဆယ်ရဲ့သာမာန် FB သုံးတုန်းကဘဝလေးရယ် Fb Fri လေးတွေ ကိုရောသတိရလို့ပါ....တစ်ခါတလေ သူတို့က ဒီ Page မှာမန့် ဝင်ရေးရင် စိတ်ထဲကအရမ်းပျော်မိခဲ့တာပါ.....ပြီးတော့ ဆယ့်မိဘ အတွက်လဲဆယ်အချိန်ပေးချင်လို့ပါ......
All My. Big. Fan တွေကိုထာဝရသတိရနေမှာပါ..... Good Bye ပါနော်.... ဒါနောက်ဆုံးစတေးထပ်ပါပဲ....အိုခီ.....ဟုတ်....ကျိုင်းဇူးပါစင့် ဆယ်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်....အားလုံးပျော်ရွှင်ကျန်းမာ ပြီးချစ်သောသူတွေနက်ချစ်ခွင့်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလက်ရင်း
အားလုံးကိုသတိရနေမယ့်......... ။။ ။။
Cele Cele Small 6.12.2016